आफ्नै दिदीलाई र भाईलाई भगाएर विबाह - हातेमालो डेली
आफ्नै दिदीलाई र भाईलाई भगाएर विबाह
बाँकेको बैजनाथ ५ को बनकटुवामा यतिबेला सुन्नै नसकिने र कसैले पनि सोंच्नै नसकिने भयानक घटना घटेको छ । जहाँ आफ्नै दुई दाजुभाईका १३ दिने जुठो लाग्ने दुई दिदीभाईले बिबाह गरेका छन् ।दिदीभाई बीचपनि वर्षौंदेखि माया प्रेमको सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा भारतमा बस्दै आएका देवेन्द्रले आजभन्दा १० दिनअघि मात्र नेपाल आएर दिदी खेमसरालाई भगाएपछि मात्र परिवार र सबै आफन्तलाई थाहा भएको हो ।
यो कुरा थाहा भएपछि यतिबेला देवेन्द्र र खेमसरा दुवैको परिवारमा तनावको वातावरण श्रृजना भएको छ । यसका साथै उनीहरुका आफन्तसंगै पुरै गाउँ नै अचम्मित बनिरहेको छ । यो समाचारलाई फ्लो गरि रहँदा एउटा अर्को कुरा पनि बाहीरिएको छ ।
त्यो के हो भने आफ्नै दिदीलाई र भाईलाई भगाएर विबाह गराउनमा आफ्नै घरकी अर्की छोरीको हात रहेछ भन्ने कुराले घटनाले झनै नयाँ मोड लिएको छ । यो कुराको सुईँको पाएपछि यतिबेला भाईसंग भागेर जाने खेमसराकी बहीनी पारुलाई घरका अन्य सदस्यले घरबाट निस्किएर जान भन्दै द’बाब दिईरहेका छन् ।
तर आफुले दिदी र भाईलाई भगाउनमा कुनै पनि प्रकारको भूमिका नखेलेको भन्दै यो कुरा साँचो नभएको पारु बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘दिदी भाई भ’नाभ’न गरी बोल्थे ।
के दिदी भाई बोल्दा कसैले शंका गर्छ र ? पक्कै पनि कसैले गदैनन् । र मैले पनि गरिन् । तर उनीहरु भाग्ने दिन दिदीले मलाई कोहलपुर हिन काम छ भनेको हुनाले म दिदीसंग साथी गई दिएकी थिएँ । तर मलाई के थाहा उनीहरु भाग्दैछन् भन्ने कुरा ।’ पारुले यो कुरा आफुलाई बुवाआमा र काकाकाकीले घर छोडेर जान भनेपछि मिडियामा रुँदै बताएकी हन् ।
आफ्नै छोरीले देवरको छोरासंग भागेर गएको कुरालाई खेमसराकी आमा मिडियामा रुँदै भन्छिन्,‘गाउँ समाजमा मुख नै देखाउन नहुने बनाए । माईत तिरबाट आफ्नै बहीनीको छोरा घरतिरबाट आफ्नै देवरको छोरा । यीनीहरु आफ्नै दुईभाई दुईबहीनी हुन् । के गरे यस्तो ? सुन्ने नसकिने र भन्नै पनि सजिलै नसकिने के गरे गरे यस्तो ।
Previous articleनेपाली सेनाले माघ १९ गते राति बख्तरबन्द गाडीले काठमाडौंको चक्रपथमा चक्कर लगाउने
Next article‘अलिफ भाइरल होइनन्, उनी साधनाका साथ यो स्थानमा आई पुगेका हुन्’गायक बद्री पंगेनी